Xildhibaanada ka soo jeeda Beesha Muddulood oo xalay la kulmay Madaxweyne Farmaajo – STAR FM SOMALIA
Xildhibaanada ka soo jeeda Beesha Muddulood oo xalay la kulmay Madaxweyne Farmaajo
Xildhibaanada labada Gole ee ka soo jeeda Beesha Muddulood ayaa xalay la kulmay Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo, iyagoo ugu hambalyeeyay in doorashadii uu ku guuleystay ee xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Kulankan oo ahaa mid albaabada ay u xirnaayeen ayaa waxaa ka qeyb galay 16 Xildhibaan oo ka tirsan labada Aqal, Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Madaxweyne kuxigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada labada gole ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin doorashada ay u dhacdo si dimoqraadi ah oo nabadgelyo ah, isla markaana is bedel ay dadka Soomaaliyeed ku farxeen uu dalka galay, iyagoo u rajeeyay in Madaxweynaha uu la garab galo xilka.
Xildhibaanada ayaa labo arrin ula tagay Madaxweyne Farmaajo, mid waxaa uu ahaa inuu ka shaqeeyo, sidii shacabka Muqdisho matalaadooda helaan, maadaama ay ahaayeen kuwii u horeeyay ee u soo banaan baxay markii uu ku guuleystay doorashada Madaxweynaha, ayna ka rajeynayaan.
Sidoo kale Xildhibaanada labada gole ayaa hor-dhigay codsi ah in beesha Muddulood la siiyo xilka Ra’iisul Wasaaraha
Mid ka mid ah Xildhibaanadi u tagay Madaxweyne Farmaajo oo diiday in magaciisa la xuso ayaa sheegay in dalabkooda ahaa mid soo jeedin ah, isla markaana uu jiri doono kulamo kale marka uu xafiiska la wareego
Xildhibaanada, waxgaradka, siyaasiyiinta iyo odayaasha Beesha Muddulood ayaa labadii maalmood ee la soo dhaafay kulamo ku lahaa Magaalada Muqdisho, waxaana beesha ay dalbaneysay in la siiyo xilka Ra’iisul Wasaaraha, maadaama horay beesha uga tanaasushay xilal badan, markii ay hayeen xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Beelaha Hawiye ayaa xusul duub ugu jira xilka Ra’iisul Wasaaraha, waxaana magaalada Muqdisho ka socdo kulamo kala duwan oo beelaha ay ugu ololeynayaan xilka Ra’isul Wasaaraha oo hada u muuqda Kursi u furan beelaha oo dhan u furan.
Ciidamo Mareykan ah oo ku biiray dagaalka Kenya ay kula jirto Shabaab ee Kaymaha Boni
Cabdiweli Gaas oo ka hadlay sida uu u arko isbedelka ku dhacay hogaanka dowlada Somalia